Ahoana ny fanokafana orinasa mpangataka cannabis any Massachusetts - Massachusetts fantsom-panaterana Massachusetts
Ahoana ny fomba hanokafana orinasa mamatsy otrikaina any Massachusetts
Te hanana fahazoan-dàlana mitondra cannabis any Massachusetts ianao?
Big vaovao momba ny lisan'ny fahazoan-dàlana fialamboly dia nivoaka avy tao amin'ny Massachusetts Cannabis Control Commission (CCC) tamin'ny fivoriana isam-bolana tamin'ny 7 Mey. Ny tena zava-dehibe, ny CCC nifidy handroso miaraka amin'ny fahazoan-dàlana amin'ny fialam-boly sy ny fahazoan-dàlana amin'ny serivisy ihany koa (fahazoan-dàlana ho an'ny serivisy miampy fahazoan-dàlana amin'ny orinasan'ny rongony efa misy). Hisokatra ny fangatahana fahazoan-dàlana amin'ny 28 May 2020, ary mandritra ny roa taona dia hisy fangatahana manokana ho an'ny mpangataka ara-tsosialy sy ny fangatahana ara-toekarena. Ny CCC dia hampiasa ihany koa ny dingana "fanamarinana" vaovao, izay anaovan'ny CCC ny fizahana ny fizahana sy ny fizahana ny fampiharana alohan'ny handraisan'ny mpangataka ny fankatoavana eo an-toerana. Ny tanjona dia ny hananana ny fankatoavan'ny CCC raha mandeha any amin'ny kaominina monisipaly ny mpangataka.
Ny mpangataka dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra takian'ny ankapobeny amin'ny toeram-piasana rongony hita 935 CMR 500.105 amin'ny fitsipika fampiasana olon-dehibe. Ho fanampin'izany, ny Massachusetts dia mametraka fepetra takian'ny fiarovana manokana (935 CMR 500.110 (8)) sy ny fepetra takian'ny asa (935 CMR 500.145).
FIVAROTANAANA ARY FANAMBANANA NY VAVOLOMBELONANA
Ampiofanina ny fiaranao sy mampiofana ny mpamily anao
Ny fiara rehetra dia tsy maintsy manana mpiasa roa, farafahakeliny roa, ary farafahakeliny iray dia tsy maintsy mijanona ao anaty fiara foana. 935 CMR 500.110 (8) (c). Ny mpandraharaha rehetra dia tsy maintsy manatanteraka ny fiofanana momba ny mpivarotra tompon'andraikitra araka ny takian'ny 935 CMR 500.105 (2) (b), izay ahitana fampiofanana momba ny:
Manao fitantanana tsara;
Fomba fitantanana vola vola azo antoka;
Paikady ahafahana mihena ny loza mety hitranga;
Fanangonana sy fampitana vaovao hanampiana amin'ny fanadihadiana;
Ireo fomba fanamarinana momba ny famantarana;
Mariky ny fahantrana;
Fampandrenesana ireo mpanjifa amin'ny fampiasana ireo fitaovana fanoratana mandidy; ary
Ireo sehatra fiofanana hafa notapahin'ny Kaomisera dia hampidirina amin'ny fandaharam-pandrindrana andraikitra amin'ny asa fampiofanana
Ireo masoivoho dia tsy maintsy mitatitra tsy fitoviana tsy mahazatra amin'ny lisitra amin'ny CCC sy ny fampiharana lalàna eo an-toerana ao anatin'ny 24 ora. Ireo masoivoho dia tsy maintsy mitatitra ihany koa ny lozam-pifamoivoizana, ny fanodikodinam-bola, ny fatiantoka na tranga hafa mety hotaterina ao anatin'ny 24 ora. Voarara tanteraka ny basy. Eo ambanin'ny 925 CMR 500.145 (1) (f), ny fiara dia mety manana marijuana 10,000 $ fara-fahakeliny amin'ny fotoana iray. Ny fanaterana rehetra dia tsy maintsy arahana amin'ny alàlan'ny SOR amidy amin'ny varotra natolotry ny CCC, ary ny fanaterana dia voafetra ara-jeografika amin'ny (1) toeran'ny manana fahazoan-dàlana ary (2) izay tanàna mamela ny antsinjarany sy / na nampandre ny CCC mamela ny fandefasana izany. Raha tsy nomen'ny lalàna monisipaly lalàna mazava ny fanaterana dia tsy azo atao any ivelan'ny varavarankely amin'ny 8:00 maraina sy 9:00 alina ny fanaterana
Karazana fiara inona no ilainao?
Ny mpiasan'ny fahazoan-dàlana dia manam-paharoa, takiana fiarovana fanampiny amin'ny 935 CMR 500.110 (8). Ny fiara rehetra dia voadinika avy amin'ny CCC alohan'ny hampiasana azy. Ny fahazoan-dàlana avy amin'ny fahazoan-dàlana dia manana adidy hampahafantatra ny CCC ny tanjon'izy ireo hampiditra fiara vaovao sy hanadihady azy ireo alohan'ny fandidiana.
Voalohany, ny fitsipika dia nametraka fitakiana be dia be ho an'ny fampisehoana fiarovana ilaina amin'ny fiara fitaterana rehetra. Ny lisitr'ireo fepetra takiana dia toy izao manaraka izao:
Rafitra fiarovana ny fiara izay misy fanairana ivelany;
Takelaka fitahirizana azo antoka sy mihidy ao anaty fiara tsirairay ary tsy mora esorina amin'ny fikaterana ny vokatra marijuana na marijuana;
Toerana fitahirizana azo antoka ary mihidy ao anaty fiara tsirairay ary tsy azo esorina mora ho an'ny tanjon'ny fitaterana sy fahazoana vola ampiasana vola ho fandoavana ny vokatra marijuana na vokatra marijuana;
Fitaovana fifandraisana azo antoka eo amin'ny fiara tsirairay sy ny toerana fandefasana Marijuana Establishment izay azo arahi-maso amin'ny fotoana rehetra fa manao fiara fitaterana ny fiara. Ny dikan'ny fifandraisana dia misy:
radio nomerika roa na analog (UHF na VHF);
Rafitra fanaraha-maso momba ny rafitra (GPS) manerantany:
Tsy fitaovana finday ary izay mipetaka amin'ny fiara mandritra ny fotoana rehetra fa ny fiara misy mariage na vokatra Marijuana; ary
Manara-maso ny fahazoan-dàlana haterahana ihany na Fananganana Marijuana miaraka amin'ny Fanomezana Fampidinana amina toerana raikitra mandritra ny fitaterana ny vokatra marijuana na marijuana ho anton'ny fanaterana trano miaraka amin'ny fisavana ny toerana misy farafahakeliny isaky ny 30 minitra. Ny fahazoan-dàlana mitondra entana na ny mari-pananana marijuana ihany no manome alàlana ny fanaraha-maso ny GPS mankany amin'ny mpizara teknolojia fahatelo an'ny antoko fahatelo izay misy ny fahazoan-dàlana ho an'ny fandefasana, na ny mari-pana mari-panafosafo miaraka amin'ny mari-pana goavambe. -only Lisensy na fananganana Marijuana miaraka amin'ny Fanomezana Fanomezana dia tompon'andraikitra amin'ny antoka fa ny fisaraham-panaraha-maso dia ilaina araka ny takian'ny 935 CMR 500.000.
Rafitra lahatsary misy fakantsary horonantsary iray na maromaro ao amin'ny faritra fitahirizana fiara ary iray na maromaro fakan-tsary mihetsika ao amin'ny faritra mpamily ny fiara ary tokony hiasa amin'ny fotoana rehetra mandritra ny fizotran'ny fitaterana rehetra izay tokony hisy:
ny fahafahana mamorona loko mazava sary fa mbola velona na voarakitra; ary
Daty sy fotoana voatondro mipetaka amin'ny rakitsoratra rehetra izay tokony hampifangaro ary apetraka tsara amin'ny fotoana rehetra ary tsy hitahiry ny sary.
Ny fitaovam-piarovana rehetra ao amin'ny fiara tsirairay dia tokony ho lamin'asa tsara ary tokony hodinihina sy zahana mandritra ny fotoana fanao mahazatra, fa tsy mihoatra ny 30 andro amin'ny alimanaka alohan'ny fisafoana sy fitsapana teo aloha.
Ny fisoratana anarana sy ny famolavolana ny fiara fitateranao
Ny fiara rehetra dia tsy maintsy raisina ho toy ny ara-barotra ary dinihin'ny fanjakana. Ireo fiara ireo dia tsy manana marika na tandindona ivelany izay manondro ilay fiara ampiasaina amin'ny fandefasana rongony (ohatra, tsy misy ravina mangatsiaka), ary ny vokatra rongony dia tsy hita avy eny ivelan'ny fiara. Ny fiara tsirairay dia tsy maintsy manana toeram-pivarotana manokana voatokana, voatokana ho an'ny fitehirizana rongony amin'ny fiara tsirairay, ary koa fitoerana fitahirizana manokana amin'ny vola. Ireo mpamily dia mila mifandray amin'ny fahazoan-dàlana rehefa tonga sy mandao ny fandefasana, ary isaky ny 30 minitra mandritra ny dia. Mila fahazoan-dàlana mitokana ho an'ny fiara tsirairay ny fahazoan-dàlana, ary isaky ny fandefasana azy ireo dia tokony hosoratana:
Ny toerana misy ny fananganana Marijuana voalohany sy daty sy fotoana nandaozana ilay toerana;
Ny kilaometatry ny fiara fitaterana rehefa miala amin'ny kilaometatry ny mari-piadiana Marijuana rehefa tonga amin'ny toerana alehan'ny mpanjifa tsirairay, ary kilaometatra miverina amin'ny fananganana ny Marijuana;
Ny daty sy ny fotoana hialana amin'ny fananganana Marijuana sy fahatongavana amin'ny alàlan'ny mpanjifa tsirairay isaky ny alàlan'ny fandefasana; ary
Fidirana manondro ny daty sy ny fotoana fandefasana farany amin'ny baiko
Massachusetts Cannabis Famoahana fahazoan-dàlana
FIVORIANA FAHASORANA SY NY FANGARAHANA ETO
Fandraisana an-tsokosoko sy firaketana varotra
Ny fanaterana otrikaretina tsirairay any Massachusetts dia tsy maintsy manana fisehoana feno, miaraka amn'ny duplice iray nohazonin'ilay fahazoan-dàlana ary notazomina mandritra ny herintaona farafahakeliny mba hahafahan'ny CCC. Ny fisehoan-javatra dia tsy maintsy misy:
Ny anarany, ny adiresy mari-pamantarana sy ny fahazoan-dàlana fiaviany;
Ny anarana sy ny laharan'ny lisan'ny fahazoan-dàlana haterahana ihany na ny fananganana Marijuana miaraka amin'ny Fanomezana fandefasana an-trano manatanteraka ny fandefasana trano;
Ireo anarana sy Agence Establishment Agent number of the Marijuana Establishment agents izay manao ny fandefasana;
Ny anaran'ny Consumer sy ny adiresy;
Famaritana ny vokatra Marijuana na Marijuana nentina, ao anatin'izany ny lanja sy ny endriny na karazana vokatra;
Ny tsipika fanaovana sonia ho an'ireo mpandraharaha izay nitatitra ny vokatra marijuana na marika;
Fanamarin-tsonia ho an'ny mpanjifa izay mandray ny vokatra marijuana na marika; ary
Ny fahazoan-dàlana mitondra entana, ny modely ary ny takelaka fahazoan-dàlana ihany no mitondra ny fahazoan-dàlana mitondra entana na ny marika mariana.
Fangatahana fakantsary vatana ho an'ny fahazoan-dàlana Massachusetts Cannabis
Ho fanampin'ny fitakiana fiara lehibe, ny mpamily fitaterana entana (agents) dia mila manana fakan-tsarimihetsika miasa amin'izy ireo isaky ny misy azy ireo ivelan'ny fiara fitaterana. 935 CMR 500.100 (8) (b) manampy ireto fepetra manaraka ireto ho an'ny fakan-tsary amin'ny vatana:
Ny fakantsary fitambaran'ny vatana dia harakitra ireo fahaterena rehetra.
Tokony hampahafantarina ny mpanjifa amin'ny fakan-tsary amin'ny fampiasana ny fakantsary vatana amin'ny firaketana ny fandefasana ny fandefasana amin'ny fotoana ara-potoana, amin'ny porofon'ny filaminana sy ny manangana Estera amin'ny mari-pahaizana momba ny marijuana.
Ho fanampin'ny fanomezana fampandrenesana, ny fakan-tsary amin'ny vatana dia aseho miharihary amin'ny olona ao amin'ny Agent Marijuana Establishment Agent.
Ny fahazoan-dàlana mitondra entana na ny mari-pananana marijuana ihany no tokony hihazona horonan-tsary amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana tamim-pahatokisana sy arovana amin'ny fanambaràna ka hatramin'ny alalàn'ny lalàna tanteraka. Ny fahazoan-dàlana dia hampihatra ny fiarovana angon-drakitra, hitahiry ny firaketana an-tsoratra ary ny firaketana fandringanana ho an'ny horonan-tsary fakan-tsary ho fanarahana ny lalàna momba ny tsiambaratelo federaly sy an'ny fanjakana, anisan'izany saingy tsy voafetra amin'ny lalàna fiarovana fiarovana an'ny mpamily, 18 USC § 2721, ny Massachusetts Identify theft Act, MGL c. 93H, 201 CMR 17.00: Fitsipika momba ny fiarovana ny mombamomba ny mponin'ny mponina momba ny sarin-tany, ary ny lalàna momba ny fanajana ny mombamomba ny informatika, MGL c. 66A.
Ny horonan-tsarimihetsika dia azo tazonina mandritra ny 30 andro farafahakeliny, na, miaraka amin'ny fampandrenesana ny fahazoan-dàlana haterahana ihany na ny fanolorana mari-pana, miaraka amin'ny Fanamboarana ny fandefasana, mandritra ny fotoana maharitra ataon'ny fanadihadiana na amin'ny fampiharana ny lalàna, izay lava kokoa. Mba hahazoana horonantsary avy amin'ny fahazoan-dàlana iray amin'ny ampahany amin'ny famotopotorana, ny mpiasan'ny vaomiera dia tokony hifampidinika amin'ny Tale Mpanatanteraka ary arak'izay azo atao, jereo ilay horonantsary eo amin'ny toerana fitahirizana.
Ny fahazoan-dàlana ho an'ny mpampita entana na ny mari-pana marika fotsiny dia tsy hizara na hanambara ny ampahany amin'ny fampahalalana na horonan-tsary izay vokatry ny fampiasana fakantsary vatana araka ny 935 CMR 500.110 (8) (b) na iza na iza ny ankolafy fahatelo tsy nomena alàlana mazava tamin'ny 935 CMR 500.000 ahafahana miditra ao anatin'ity horonantsary horonantsary ity, iharan'ny fitanana amin'ny 935 CMR 500.110 (8) (b) 6.a. sy b.
Ny fahazoan-dàlana licence na marijuana dia manome alàlan'ny horonantsary horonantsary ho an'ireo manampahefana amin'ny fampiharana ny lalàna amin'ny asany araka ny fahazoan-dàlana ara-pitsarana na valin'ny famoahana mampiseho ny antony mety hitranga.
Tsy misy na inona na inona amin'ny 935 CMR 500.110 (8) 6. dia mandrara ny fampiharana ny lalàna tsy hanao fikarohana na fanenjehana araka ny lalàm-panorenana tafiditra, fa tsy voafetra ho amin'ny toe-javatra mampidi-doza amin'ny fiarovana, ary misy toe-javatra mampiavaka na vanim-potoana hafa izay tsy maintsy fotoana na fotoana hanaovana fangatahana alalana.
Fanaovana fandefasana mari-pana any Massachusetts
Ny fanjakana dia mametraka protocols hentitra amin'ny fomba, oviana ary iza no azo anaovana fanafahana. 935 CMR 500.145 (2) manome:
Ireo vokatra mararin'ny marika sy marika rehetra nomen'ny fahazoan-dàlana tokana dia ho azo avy amin'ny mpivarotra mari-pahaizana manana alalana ary misy fahazoan-dàlana mitondra ny fahazoan-dàlana.
Ny baiko ho an'ny fanaterana an-trano dia ho raisin'ilay mpivarotra rongony iray ary alefa any amin'ny fahazoan-dalana avy amin'ny fahazoan-dàlana ho an'ny trano iray.
Ny vokatra marihitra ihany no rakotra no afaka atolotra. Ny vokatra mety simba na ny fotoana sy ny hafanana mifehy ny fahasimbana dia tsy avela ampitaina amin'ny fahazoan-dalana avy amin'ny fahazoan-dàlana ihany na ny fananganana Marijuana miaraka amin'ny Fanamboarana ny fandefasana.
Ny fahazoan-dàlana ho an'ny fandefasana ihany na ny fanamboarana mari-pahaizana marijuana dia ny entana Vokatra na mariana ihany no omena amin'ny vokatra Residence. Ny fahazoan-dalana ho an'ny fandefasana ihany na ny fanamboarana mariage dia tsy azo atao ny mandefa any amin'ny oniversite na oniversite; ary ny trano fonenam-panjakana federaly voafaritry ny https://resources.hud.gov/.
Ny fahazoan-dalana ihany no andefasana ihany no hanome ny vokatra Marijuana na marijuana izay fahazoan-dalana manokana noraisin'ny mpivarotra mari-pahaizana marieana iray izay misy ny fahazoan-dàlana mitondra ny fahazoan-dàlana. Ny fahazoan-dàlana ihany amin'ny fangatahana dia voarara tsy handefa vokatra Marijuana na marijuana tsy misy baiko manokana napetraka ho an'ny trano iray voafaritra. Ny baiko iray dia azo aorina mivantana amin'ny alàlan'ny mpivarotra mari-pahaizana an-tsena na amin'ny alàlan'ny varotra teknolojia andiany fahatelo voatondro amin'ny vaomiera eo ambanin'ny 935 CMR 500.145 (1) (e).
Ny Fananganana Marijuana miaraka amin'ny Fanomezana Fanomezana dia tsy hitondra afa-tsy ny vokatra Marijuana na Marijuana izay nahazoana ny baiko manokana. Fananganana Marijuana miaraka amin'ny Fanomezana Fanomezana dia voarara tsy handefa vokatra Marijuana na marijuana tsy misy baiko manokana natokana ho an'ny trano iray voafaritra. Ny baiko iray dia azo aorina mivantana amin'ny alàlan'ny tobim-paritra Marijuana miaraka amin'ny Fanomezana Fanomezana na amin'ny alàlan'ny varotra teknolojia andiany fahatelo voatondro ho an'ny Vaomiera eo ambanin'ny 935 CMR 500.145 (1) (e).
Ny fahazoan-dàlana irery na ny orinasa Marijuana miaraka amin'ny fanekena fanaterana dia voarara amin'ny fandefasana vokatra marijuana na marijuana bebe kokoa amin'ny mpanjifa iray noho ny vola azon'ny MGL c. 94G, § 7 (a) (1). Ny baikon'ny isam-batan'olona dia tsy tokony hihoatra ny ondran'ny Marijuana na ny lanjany maina. Ny filaharana tsirairay dia hatolotra ny mpanjifa tsirairay izay fantatra amin'ny baiko aorian'ny fanamarinana ny mombamomba ny olona mifanaraka amin'ny fepetra takiana 935 CMR 500.140 (2) (d) sy 935 CMR 500.145 (3). Ny fahazoan-dàlana irery na ny orinasa Marijuana miaraka amin'ny fanamafisana ny fandefasana dia tsy hanome afa-tsy baiko iray isaky ny mpanjifa isaky ny fandefasana.
Ny mpahazo fahazoan-dalana ihany na ny fananganana Marijuana dia tsy mampita amin'ny mpanjifa iray ihany ao amin'ny trano fonenana iray mitovy amin'ny indray mandeha isan'andro amin'ny alimanaka ary amin'ny ora fandefasana ihany.
Ho an'ny fandefasana trano, ny baiko tsirairay dia tsy maintsy amboarina ary misy marika arakaraka ny 935 CMR 500.105 (5) ary (6) avy amin'ny famoahana ny baiko alohan'ny fitaterana ny fahazoan-dalana avy amin'ny Delivery-only Licence na ny mari-pananganana marijuana miaraka amin'ny Fanomezana ho an'ny mpanjifa.
Izay vokatra marijuana na marika tsy azo averina na nolavin'ny mpanjifa dia alefa any amin'ny fananganana avy any Marijuana Estity izay nanome ny vokatra raha vao nisy ny fandefasana hafa rehetra nampidirina tao anaty fisehoana fanaterana. Ny fahazoan-dàlana ihany na ny fananganana Marijuana dia voarara tsy hitazona ny vokatra marijuana na vokatra marika natokana hoentina. Andraikitry ny fahazoan-dalana avy amin'ny Fanaterana ihany na Fananganana Marijuana miaraka amin'ny Fanomezana Fandeferana mba hahazoana antoka fa misy vokatra tsy voaterina averina amin'ny fivarotana Marijuana mety ary tsy notazonin'ny mpisolo varotra ihany na Fanamboarana Marijuana miaraka amin'ny Fanomezana Fanomezana.
Fanamarinana ny vanim-potoana ho an'ny mpanjifa
Ny mpivarotra Mariana dia tsy maintsy mitaky ny fividianana mpanjifa amin'ny alàlan'ny fahazoan-dalana amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana ho an'ny mpanjifa na ny mari-panomezana mari-pananana miaraka amin'ny mari-panomezana fanaterana. izy na tamin'ny taonany tamin'ny fotoana nandefasana azy dia nodinihina sy nohamarinin'ny mpivarotra rongony alohan'ny laharam-pahamehana voalohany
Ny fanamarinana mialoha ny famantarana ny mpanjifa dia tanterahina mivantana ao amin'ny toerana ara-batana an'ny mpivarotra Marijuana na amin'ny alàlan'ny fitaovana elektronika nankatoavin'ny Komisiona ary ao anatin'izany ny fanadinana ny mari-pamantarana azo antoka sy tsy lany daty navoakan'ny mpanjifa izay mitondra daty nahaterahana mifanaraka amin'ny 935 CMR 500.140 (2) (d). Ny manana fahazoan-dàlana tokana na Marijuana Establishment miaraka amin'ny fanekena fanaterana dia voarara tsy hanao fandefasana amin'ny mpanjifa rehetra izay tsy nametraka kaonty amin'ny fandefasana amin'ny alàlan'ny fanamarinana mialoha ny famantarana ny mpanjifa amin'ny Marijuana Retailer.
Ny fanamarinana mialoha ny famantarana ny mpanjifa dia hataon'ny Marijuana Establishment miaraka amin'ny Endorsement Fanaterana amin'ny alàlan'ny fomba elektronika nankatoavin'ny Komisiona ary ao anatin'izany ny fanadinana ireo mari-pamantarana sary navoakan'ny governemanta marim-pototra izay manome daty nahaterahana. Ny fananganana marijuana miaraka amin'ny fanekena fanaterana dia voarara tsy hanao fandefasana amin'ny mpanjifa rehetra izay tsy nametraka kaonty amin'ny fandefasana amin'ny alàlan'ny fanamarinana mialoha ny famantarana ny mpanjifa.
Ny fahazoan-dàlana mitondra entana na ny mari-pananana marijuana ihany no tsy mampita entana Marijuana na marijuana amin'ny hafa fa tsy ny mpanjifa izay nanome baiko ny vokatra marijuana.
Ny fahazoan-dàlana mitondra entana na ny mari-pananana marijuana ihany no hanamarina ny vanim-potoana sy ny fampahafantarana ny mpanjifa amin'ny fotoana izay atolotra ny vokatra marijuana na marijuana ho an'ny mpanjifa amin'ny toeram-ponenana iray mba hahazoana antoka fa tsy omena ny vokatra mariana sy ny mariage. amin'ireo olon-dehibe kokoa noho ny 21 taona. Alohan'ny hanalefahana ny fahazoan-dàlana amin'ny vokatra marihitra na marijuana, ny mari-pahaizana momba ny mari-pahaizana marijuana dia mitondra ny fanamarinana fa ny famantarana ny mpanjifa mandray ny marika mariana na marijuana dia mifanandrify amin'ny fampahafantarana mialoha ny mpanjifa izay nametraka ny baiko ho an'ny fandefasana. by:
Ny fijerena ny sary azo avy am-piterahana avy amin'ny governemanta ho an'ny Preverification eo ambany 935 CMR 500.145 (3) (a);
Fijoroana porofo momba ny filaminana namboarina tamin'ny ora; ary
Fandraisana ny sonia an'ny mpanjifa izay nanome baiko ny vokatra marijuana na marijuana momba ny vokatra marika na marika mari-pamokarana ary manamarina fa ny sonia dia mifanentana amin'ny fampahafantarana sary avy amin'ny governemanta naseho.
Mpanao lalàna momba ny trano fonenana
Mila mpanao lalàna momba ny raharaham-barotra?
Antsoy amin'ireo biraon'ny lalànay ny fanontanianao momba ny lalàna ho fanampiana anao:
fifandirana amin'ny fifanarahana ara-barotra
[contact-form-7 id = ”221523 ″ lohateny =” Fomban-tongotra ”]